Wasiir; Khadiijo Maxamed Diiriye oo gaari iyo lacag u dhiibtay Barkhad+ - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Wasiir; Khadiijo Maxamed Diiriye oo gaari iyo lacag u dhiibtay Barkhad+
Wasiir; Khadiijo Maxamed Diiriye oo gaari iyo lacag u dhiibtay Barkhad+
Sida ay wardeeq news u xaqiijiyeen ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maareynta Musiibooyinka Qaranka, wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa gaari nuuca raaxada ah u dhiibtay Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun, oo ka mid noqday Golaha Wakiilada ee Somaliland.
Previous articleXukumada, Somalia oo Rooble ku cadaadineysa inuu xilka ka qaado Xijaar – Yaa lagu beddeli rabaa?
Next articleFAHFAHIN: Dagaal khasaare Xoogan Geystay Oo Ka Dhacay Gobolka Gedo